Qaraxyadii Xaawo Cabdi oo lagu hoobtay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Qaraxyadii Xaawo Cabdi oo lagu hoobtay
Qaraxyadii Xaawo Cabdi oo lagu hoobtay
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay tiro ka badan 29 kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay kaddib qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala bartilmaameedsaday gawaari ay lee yihiin ciidamadda nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Sida laga soo xigtay guddoomiyaha gobolka Sh/hoose, Cabdulqaadir Maxamed Nuur ‘Siidii’, oo la socday gawaarida AMISOM ee la weeraray wuxuu warbaahinta u sheegay inay jiraan khasaare soo gaadhay ciidamadda, hase ahaatee ay dhibaatada ugu badan haleeshay shacab qaarkood saarnaa gaadiid dadweyne iyo kuwo hareer marayay jidka uu qaraxu ka dhacay ee agaggaarka deeggaanka Xaawa Cabdi.
Isla goobtaasi, qarax kale ayaa lala beegsaday ciidamadda amniga ee dawladda Soomaaliya intii lagu gudajiray gurmadka dhaawacyada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay 6 qof oo ay ku jiraan laba askari.
Masuuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay xarakada Shabaab ee Soomaaliya inkastoo ay lee yihiin bartilmaameedku wuxuu ahaa saraakiil Afrikaan iyo Maraykan ah oo la doonayey in loogu aargudo Abuu Zubeyr.
Previous articleHRW iyo AMISOM oo ku muransan kufsi haween
Next articleKay: waxaan u wada jirnaa dhismaha Baydhabo